ओहो, आयो आज एमसीसीको देउबा र प्रचण्डलाई एस्तो कडा सन्देश, अब के होला एमसीसी ! – Cn Chautari
ओहो, आयो आज एमसीसीको देउबा र प्रचण्डलाई एस्तो कडा सन्देश, अब के होला एमसीसी !
माघ २७, २०७८ बिहिबार 363
अमेरिकी सहयोग परियोजना ,,।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले फेब्रुअरी २८ सम्म सम्झौता नेपालको संसदबाट पास नभए फिर्ता हुने सन्देश दिएको छ। बुधबार साँझ भएको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा बोल्दै एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले ।
नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन लागि आगामी तीन हप्ता निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला *****फेब्रअरी अन्तिमको समय सीमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री ।
शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं तोकेको हुनाले फेरि समय सक्न नथपिने उनले बताइन्।‘फेब्रुअरी २८ को समय सीमा एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न वा छलफल गर्नलाई होइन, ।
पास गर्नलाई हो,’ सुमारले भनिन्,‘हरेक समय सीमा र सम्झौताको अर्थ हुन्छ। अब फेरि ढिला गर्न हामी अर्को बहाना स्वीकार्न सक्दैनौं।’एमसिसी सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नहुने पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
Prev‘एमसीसी फिर्ता गयो भने मुलुक ६ महिनाभित्रै सोमालिया बन्छ’- नेता झा
Nextखुसीको खबर: साउदीमा छट्प-टाइ रहेका आयुष उपचार पछि नेपाल फर्किए !
कुनै पनि हालतमा MCC पास नगर्न नेपाललाइ पाकिस्तानको खबरदारी
एमसीसी पवित्र सम्झौता हो, नेपालीलाई एमसीसि भनेको के हो थाहा छैन : महत